XOG: Madaxweyne Farmaajo iyo Sheekh Shariif oo wada hadalo khadka taleefanka dhex maray
October 31, 2019 F.G 0
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in xalay wada hadalo qadka taleefanka uu dhex maray Madaxweyne Farmaajo iyo Sheekh Shariif. Ilo wareed muhiim ah oo ku dhow dhow xubnaha Madasha Xisbiyada Qaran ayaa xaqiijiyay in Madaxweyne Farmaajo la soo xiriiray Sheekh Shariif, kana dalbaday in si gaar ah u kulmaan, hase ahaatee Shariifka ayaa u sheegay in shalay wixii ka horeeyay uu ahaa shaqsi, balse haatan uu hoggaamiyo Madasha Xisbiyada, isla markaana haddii ay kulmayaan ay tahay in Madasha Hoggaankeeda inay qeyb ka ahaadaan kulanka, waxaana la sheegay in Madaxweynuhu ku yiri inuu ka soo fiirsanayo. Todobaad ka hor ayay aheyd markii kulan qarsoodi ah uu Muqdisho ku dhex maray Agaasimaha NISA Fahad Yaasiin iyo Xubno ka tirsan Xisbiga UPD, waxaana la sheegay in kulanka labada dhinac uga hadleen arrimo kala duwan oo ku saabsan Galmudug iyo inay kala shaqeeyaan muddo kordhin dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo loo sameeyo, ayna qeyb ka noqdaan Xukuumad Wadaag. Xildhibaan C/fataax Daahir Ismaaciil oo ka tirsan Xisbiga UPD ayaa qoraal uu bartiisa Facebook ku soo qoray waxaa uu ku [Sii aqri]
Mahad Salaad “Baarlamanka Federalka Somaliya Waxa uu Naqanayaa Kan igu Liitay ee Soo Mara Dalka”
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa dhaliilay sida ay ku socoto shaqada loo igmaday Baarlamaanka Soomaaliya, isagoo is weydiiyay waxa ay tahay shaqada saxda ah ee laga rabo Guddoonka iyo Xildhibaanada Golaha Shacabka. Hadal uu ka jeediyay fahdigii Xildhibanaada ee Arbacadii, ayuu sheegay in shaqada saxda ah ee Baarlamaanka ay tahay Sharci dajin, Isla Xisaabtan, Korjoogten iyo Matalaad, wuxuuse tilmaamay in aysan jirin Xildhibaano sidaas u og shaqadooda amaba u fushada. Waxaa uu soo hadal qaaday saddex mooshin oo uu sheegay in laga keenay Xukuumada Ra’iisul Wasaare Kheyre, si loola xisaabtamo, kuwaasoo dhamaantood ay meel isaga tuureen Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna tilmaamay ineysan garaneynin sababta loola Xisaabtami la’yahay Wasiirada RW Khayre. “Gudoomiyayaaloow idinka ruuxiina xantiina ayaantaan wey badan tahay, hadii la yiraahdo Wasiir Hebel haloo yeero, hadii la yiraahdo Ra’iisul Wasaaraha Su’aalo halaga keeno, hadii la yiraahdo madaxweynaha halala Xisabatamo inaa horta idinka marka hore soo boodiin oo Maxaa loogu yeeraa aad dhahdiin ayaa halkan idiin taala” ayuu yiri Xidlhibaan Mahad Salaad. Xildhibaanka ayaa soo hadal qaaday sababaha ay u baaqdaan kulamada Baarlamaanka, wuxuuna ku micneeyay in [Sii aqri]
Dagaal Xoogan Oo Ka Dhacay Deegaano Ka Tirsan Jubbaland
Wararka ayaa Sheegaya Dagaal u dhaxeeyay Ciidanka xoogga dalka, kuwa Daraawiishta Jubbaland oo dhinaca ah iyo Al-Shabaab uu ka dhacay deegaanka Baar Sanguuni ee Gobolka Jubadda Hoose. Dagaalkan ayaa yimid, kaddib markii ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland oo howlgallo amni ka waday agagaarka deegaanka Baar Sanguuni ay weerar kala kulmeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Wararka ayaa sheegaya in dagaalka labada dhinac ay isu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana la soo sheegayaa inuu jiro khasaare ka dhashay dagaalka, balse aan la cadeyn karin inta uu la eg yahay. Hase ahaatee Al-Shabaab ayaa dhankooda sheegay in dagaalka ay ku dileen shan askari, kuna dhaawaceen sagaal kale. Sidoo kale Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland ayaa maalmihii la soo dhaafay howlgalo ka wada deegaano ka tirsan Jubadda Hoose, waxaana maalmo ka hor la sheegay in ciidamada la wareegeen tuulooyin ku dhow degmada Jamaame.
Shacabka Iyo Ganacsatada Jubbaland Oo Khasaare Weeyn Kala Kulmay Xayiradii Dowlada Dhexe Somaliya
October 30, 2019 F.G 0
Ganacsatadda degaanada maamulka Jubbaland ayaa sheegay in Khasaare weyn uu kasoo gaaray Xayiraadii ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay dhawaan saartay Magaalada Kismaayo Duulimaadyada Aada iyo kuwa ka yimaada. Guddoomiyaha Rugta ganacsiga iyo Warshadaha maamulka Jubbaland, Shaafi Raabi Kaahin ayaa sheegay in ay diiwaan geliyeen khasaraha ka dhashay xayiraadas, oo uu sheegay in Khasaare Ballaaran uu kasoo gaaray Shacabka Magaalada Kismaayo. Gudoomiyaha ayaa sheegay in Khasaaraha ugu badan uu soo gaaray dukaamada lagu iibiyo qalabka korontada ku shaqeeya, shirkdaha diyaaradaha, ganacsiga quutur daruuriga, isbitaallada, huteellada, waxbarashada, warshadaha yaryar iyo waliba makhaayadaha. “Qof walba tabartiisa ayuu khasaaray, tusaale ahaan huteellada bishii soo xareyn jiray 30 kun oo doolar, waxay na tuseen in ay soo xareyeen intaas barkeeda, waxayna arrintan aad u saameysay isbitaallada oo waxaan tagnay isbitaallo shaqada ka eryay shaqaalihii, dadkaas na waxaa ku hoos noolaa dad kale oo arrintaa ay saameysay”, ayuu yiri Shaafi Raabi oo la hadlay BBC. Khasaaraha guud ayuu ku tilmaamay in uu gaarayo boqolkiiba konton dakhligii soo geli jiray ganacsatada. “Qiimeyn ayaannu sameynay, oo xitaa Hoteelada waxay na tuseen in [Sii aqri]
Ganacsatada Somaliyeed Oo Hal Milyan ugu Deeqay Shacabka Beledweeyne Ee Fatahaada Wabiga Shabeelle
Waxaa magaalada Muqdisho maanta lagu qabtay kulan uu soo qaban qaabiyay Rugta ganacsiga Soomaaliyeed, kaasoo yabooh dhaqaale loogu uruurinayay dadka uu saameeyay Fatahaadaha Wabiyada Jubba iyo Shabelle, iyadoo dhibta ugu daranna ay gaartay dadka ku nool magaalada Beledweyn. Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, ayaa balanqaaday in wajiga hore ee gurmadka ay uga qeyb qaadanayaan $1,000 000 (Hal Milyan oo Doolar), waxeyna sheegeen iney haatan gacanta ku hayaan 630 Kun oo Doollar, todobaadyadana ay iska soo uruurinayaan inta Halka Milyan ka hartay oo ah 370 Kun oo Doolar. Ganacsatada Suuqyada Bakaaro iyo Suuq Bacaad, ayaa balanqaaday iney iyaga iska soo uruurinayaan lacagta hartay, si deg deg loogu gaarsiiyo dadka u baahan ee ay saameysay Fatahaadaha Wabiyada. Guddoomiyaha Rugta ganacsiga Soomaaliyeed C/Kariin Gabeyre, ayaa ka tacsiyadeeyay dadkii ku dhintay Fatahaadahan, wuxuuna Ganacsatada faray iney kaalin ka qaataan dadaalada socda ee loogu gurmanayo dadka uu saameeyay Fatahaadaha. Waxa uu carabka ku dhuftay in fadhiga maanta ay soo xaadireen Hoggaanka 35 Shirkadood oo kamid ah kuwa ugu Caansan magaalada Muqdisho, isagoo raja ka muujiyay in gurmadka la [Sii aqri]
SAWIRO: Dhagxaan lagu xiray Wadooyin kuyaala Muqdisho Iyo Shacbkii Oo Iska Wareejinaya
Wararka Ayaa Sheegaya in Saacadihii lasoo dhaafay dhagxaan lagu jaray wadooyin kuyaala xaafado katirsan degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshiid, waxaana dadka xaafadahaasi ku dhaqan saakay kusoo tooseen wadooyinkii ay mari jireen oo dhagxaan lagu jaray. Wadooyinka dhagxaanta lagu jaray ayaa ah jid cadayaal kuyaala dhoowr xaafadood, waxaana looga Dan leeyahay in jidadkaasi aysan marin gaadiidka kala duwan iyo sidoo kale mootooyinka. Xaafadaha dhagxaanta lagu jaray waxaa isugu soo baxay qaar kamid ah dadkii degnaa iyo sidoo kale darawalada mooto bajaajta, waxa ayna dadkaasi bilaabeen in gacmahooda wadooyinka uga leexiyaan dhagxaanta lagu jaray. Dadka qaar ayaa sidoo kale dhigay banaan bax ay uga soo horjeedeen wadooyinkan dhagxaanta lagu jaray, waxa ayna ku qeylinayeen ereyo ay kamid ahaayeen ”dooni meyno jid xirte” iyo ereyo kale. Ciidamo katirsan booliiska ayaa tagay xaafadaha ay ka dhaceen banaan baxyada iyo sidoo kale wadooyinka laga qaaday dhagxaanta, waxaana la sheegay in wadooyinka qaar wali dhagxaan ku xiran yihiin halka kuwa kalana ay dadku iyagu furteen. Shacabka magaalada Muqdisho ayaa dhibaato badan ku qaba wadooyinka dhagxaanta lagu xirtay iyo sidoo kale wadooyinka kale [Sii aqri]
Dowlada Turkiga oo u yeeray safiirka Mareykanka ee Ankara
Turkey ayaa maanta u yeertay safiirka Mareykanka ee Ankara sababo la xiriira qaraar uu meel-mariyey Aqalka Wakiilada Mareykanka oo si rasmi ah u aqoonsaday “xasuuqii Armenia”. Saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibedda Turkey ayaa sheegay in safiir David Satterfield loogu yeeray xarunta wasaaradda, sababo la xiriira “qaraarkan oo aan lahayn saldhig taariikheed iyo mid sharci toona.” Aqalka Wakiilada Mareykanka ayaa codeyn ah 405-11 waxa uu talaadadii ku ansixiyey qaraarka oo “xaqiijinaya diiwaan-gelinta Mareykanka ee Xasuuqii Armenia.” Waa markii ugu horreysay ee Aqalka Wakiilada uu ansixiyo qaraar noocan ah, kadib markii marar badan lasoo hordhigay balse lagu guul-darreystay in la meel-mariyo. Sharci-dejiyayaasha Mareykanka ayaa sidoo kale meel-mariyey sharci Ankara saaraya cunaqabateyn la xiriirta howl-galkii ay ka fulisay Waqooyiga Syria ee lala beegsaday Kurdiyiinta. Turkey waxa ay si xooggan u beenisaa eedeymaha la xiriira xasuuqa, waxayna sheegtaa in Armeniyiinta iyo Turkishkaba u geeriyoodeen natiijada Dagaalkii Koowaad ee Adduunka.
Sheekh Shariif “Ma aqbali karno in la dhaho inta koox la dhaho Xooggaga waddaniyiinta doorasho ku galeynaa”
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta loo doortay inuu hoggaamiyo Madal ay ku mideysan yihiin Xisbiyada Siyaasadda oo la magac baxay Madasha Xisbiyada Qaran ayaa ka hadlay ujeedka Madashan, isagoo ka mahadceliyay kalsoonida loogu doortay inuu hoggamaiyo. Sheekh Shariif ayaa sheegay in dowladda aysan weli caddeyn jidkii doorasho lagu geli lahaa, isla markaana aanay aqbalin wax mugdi ku jiro in la sameeyo. Waxaa uu sheegay in aanay aqbali karin in la uruuriyo Koox la magac baxday Xooggaga Waddaniyiinta in doorasho lagu galo, isla markaana aanay raalli ka noqon karin wax aan heshiis lagu aheyn in la sameeyo sida uu yiri. “Ma aqbali-karno inta koox xoogga waddaniyiinta ah la aruuriyaa la yiraahdo doorashaan galaynaa anaguna aan camirno,dowladdu inadhaheeda ha furto,Shalay MD-Xasan Sheekh School Polizio in doorasho lagu qabto anagaa ka diidnay maxaa yeelay taliyaha booliska ayaa taageersanaa wuuna naga yeelay,dowladdu ma qaban wixii doorasho laga rabay”ayuu yiri Sheekh Shariif. Isbaheysigan cusub oo ay ku mideysan yihii Madasha Xisbiyada ayaa waxay cadaadis weyn ku saari doonta dowladda Federaalka, sidii ay dalka uga hirgelin laheyd [Sii aqri]
Xeer Ilaalinta Puntland oo dalbaday in xasaanada laga qaado Xildhibaankii su’aalaha adag weydiiyay Saciid Deni
Xafiiska Xeer Ilaalinta Guud ee Puntland ayaa warqad uu u diray Baarlamaanka Puntland waxaa uu kaga dalbaday in xasaanada laga qaado Xildhibaan Cawil Xasan Daad, kaasoo Sabtidii la soo dhaafay buuq ka dhex dhaliyay furitaankii Baarlamaanka, kaddib markii uu su’aal adag uu weydiiyay Madaxweynaha Puntland Saciid Deni, taasoo keentay inuu isagoo careysan ka baxo Fadhiga. Qoraalka uu soo saaray kuxigeenka Xeer Ilaaliyaha Guud ee Puntland Dr. Maxamed Xareed Faarax ayaa lagu sheegay hadalo qadaf ah oo su’aalo loo ekeysiiyay uu Xildhibaan Cawil weydiiyay Golaha Xukuumadda, taasoo uu ku tilmaamay inay tahay mdi xadgudub ah. Akhriso qoraalka Xeer Ilaalinta:-
Madaxa Xukumada Galmudug Oo Magacaabay Guddiga Fatahaada Wabiga Shabeelle
Madaxa Xukuumada Maamulka Galmudug Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa magacaabay Gudiga u gurmashada dadka ay saameeyeen fatahaada Wabiga Shabeelle uu ka geestay Magaalada Baladweyne. Guddiga oo ka kooban Sagaal xubnood ayaa waxaa guddoomiye looga dhigey Yuusuf Xasan Ciyow,waxaana laga soo kala xulay maamulka Galmudug iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada. Xubnaha Guddiga ayaa waxaa ay qaban doonaan inay ka qeyb qaatan gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha Wabiga Shabeelle. Madaxa xukuumada ayaa shacabka Galmudug ugu baaqay in laga qeyb qaato u gurmashada Dadka ku dhibaateysan Gobalka Hiiraan gaar ahaan Magaalada baaldweyne. Hoos Ka Akhriso Magacyada guddiga uu Magacaabey Sheekh Shaakir.